Fanamboarana rohy sy fananganana marika miaraka amin'i Semalt
Ny fanamboarana rohy sy fananganana marika no fomba tsara indrindra hahamarihanao ny tranonkalanao. Ao amin'ny Semalt, fantatray fa nanandrana ny hisintona ny tranonkalanao ianao ary misy ny laharana voalohany. Izany angamba no antony mahatonga anao ho eto. Saingy toa tsy ho vitanao samirery izany.
Midika izany fotsiny fa mila ny serivisy omen'ny Semalt ianao. Ny serivisy ataonay dia manome antoka fa hahazo doka bebe kokoa ianao, izay hivadika ho mpanjifa amin'ny fotoana tsy dia misy, amin'ny vidiny mora. Tsy miankina amin'ny asa majika na tombatombana akory izahay. Mahazo ny asa vita isika noho ny maha matihanina antsika sy ny fanoloran-tena amin'ny asantsika. Kudos ho an'ny ekipa SEO mahafinaritra!
Manolotra fonosana maro samihafa izahay mba hahazoana antoka fa mitady serivisy mifanaraka amin'ny filanao tsy misy dikany ianao. Tsy mora ny nanorina orinasa na anarana. Izahay dia matoky fa maro ny seminera momba ny fandraharahana mahomby sy lahateny famporisihana no nilaza taminao ny maha zava-dehibe ny fananana marika, anarana. Saingy tsy zaran'izy ireo akory ny milaza fa sarotra ny manorina ny marika.
Androany, manana Semalt ianao hanampy anao amin'ny alàlan'ny marika anao ary ampiasain'ny matihanina efa za-draharaha mahalala ny fomba tsara hahatanterahana ilay asa. Rehefa vita ny asan'ny tranokalanao dia manome antoka izahay fa hahatsikaritra fanatsarana lehibe amin'ny marikao sy ny rohy mankany amin'ny tranokalanao.
Inona no atao hoe tranobe rohy?
Ny fananganana rohy no fomba hahazoana ireo tranonkala miorina amin'ny tranokala hafa. Raha efa namaky ny tranokalanay ianao dia tokony ho fiteny mahazatra ireo backlink. Na izany aza, eto misy famaritana. Ny backlink na hyperlink dia fomba iray ahafahan'ny mpampiasa mankany amin'ny tranokalanao amin'ny tranokala hafa. Ity dia fomba tsotra kokoa hametrahana azy. Ataon'ny Semalt ny tranokalanao lehibe be dia be ny tranokala hafa mandika ny votoatinao sasany fa mametraka rohy mankany amin'ny atiny tany am-boalohany ao amin'ny tranonkalanao. Midika izany fa ny mpitsidika mitsidika ny tranonkala hafa, tsindrio ny rohy ary misy an-telefaonina amin'ny tranokalanao. Cheers, izany dia mpampiasa iray fanampiny ampiasain'i Semalt.
Andao lazaina hoe mitady ny famaritana ny SEO ianao ianao ary alefa any amin'ny tranokala "A", fa amin'ny filazanao ny famaritana sy ny maha-zava-dehibe ny SEO, dia nangatahana ianao hanindry "eto" raha te hahalala bebe kokoa. Raha tsindrio ianao, alaina mandeha any amin'ny tranonkala vaovao toa an'i Semalt ianao. Izany no ataon'ireo rohy mankany amin'ny rohy na backlink.
Ny milina fikarohana koa dia mampiasa ireo rohy ireo mba hanoratana ny tranokala. Raha tratra ny teny iray dia mandeha miasa ireo milina fikarohana satria mitady ny safidy tsara indrindra izy io. Fa izao dia zavatra iray mahavariana momba ny backlink, fa tsy ny milina fikarohana no mijanona amin'izay heveriny fa tsara indrindra, handeha handinika lavitra an'ireo tranonkala ireo tranonkala ireo izy ireo.
Amin'izany fomba izany, ny tranonkalanao dia mendrika ny hikaroka ary mety hiseho amin'ny pejy voalohany rehefa aseho ny valiny. Saingy raha tsy tsara vintana ianao dia mahazo tsindrio raha hamorona tranokala naseho hafa mba hahafahanao miantso azy io ho toy ny fandresena.
Ankehitriny dia misy teknika maro ho an'ny fananganana rohy, ary miovaova ny fahasarotana. Amin'ny maha-manam-pahaizana SEO, fantatray fa ny fananganana rohy dia iray amin'ireo ampahany mafy indrindra amin'ny asantsika. Matetika kokoa noho ny tsy, ny tsy matihanina dia mandany ny ankamaroan'ny fotoanany mba hitadiavana azy. Noho izany antony izany, dia tokony avelanao ho an'ny ekipay mahafinaritra izay mahalala ny fomba hahazoana azy io tsara ary mifantoka amin'ny zavatra lehibe hafa.
Tsy mora ny mandray tranonkala hafa hahafantatra anao ho loharano azo itokisana. Amin'ny tsena mifaninana toy izany, ny fanamorana ny fanaovana fahavalo mihoatra ny mpiara-dia aminy, fa ny fananganana rohy dia mijanona ho iray amin'ireo fomba tsara indrindra hialana amin'ny fifaninanana.
Nahoana no zava-dehibe ny fananganana rohy ho an'ny optimization SEO?
Mba hahafantarantsika tsara ny maha-zava-dehibe ny fananganana rohy dia zava-dehibe ny ahalalantsika ny fototry ireo rohy ireo. Zavatra toy ny
Ahoana ny fomba namoronana rohy
Ahoana ny fahitan'ny milina fikarohana rohy
Ary ahoana ny fandikana ireo milina fikarohana ireo rohy ireo
<a href=https://semalt.net> fananganana rohy sy tranobe marika </a>
Fanombohana ny lisitry ny rohy: ity dia antsoina hoe marika mahazatra ary asehon'ny "a" aseho ao amin'ny ohatra nasehony etsy ambony. Manokatra ny lozam-pifandraisana io ary milaza amin'ny motera fikarohana fa ny rohy manaraka dia mankany amin'ny tranonkala iray na pejy hafa.
Toerana fitadiavana rohy. Ny fanafohezana "herf" dia maneho azy tsara alohan'ny tranokala. Midika ho an'ny referralin'ny rohy izy io ary tsy tokony hipetaka amin'ny tranonkala iray fotsiny. Ity rohy ity dia mety ho vavahadin-tserasera iray amina sary na horonan-tsary na rakitra alaina alaina.
Ny vatofamparihitry ny rohy hita maso dia ny ampahany kely amin'ilay rohy izay hitan'ny mpamaky azy amin'ny pejy eo amin'ny rohy tokony hotsindrian'izy ireo raha te-hanokatra ilay rohy izy ireo. Ity lahatsoratra ity dia mazàna narafitra tamin'ny fomba tokana mba hahafahana mijoro amin'ny lahatsoratra hafa. Matetika dia aseho amin'ny loko manga marevaka izay mahiratra ny maso, izay midika fa azo kitihina izy io.
Faranon'ny marika rohy: ny "</a>" dia midika ny faran'ny marika rohy mankany amin'ireo milina fikarohana.
Inona no tombony amin'ny backlink amin'ny motera fikarohana?
Ny masinina fikarohana dia mampiasa ireo rohy ireo amin'ny fomba roa.
Raha te hahitana pejy vaovao vaovao.
Manampy amin'ny famaritana ny fomba tokony hahatratrarana ny pejy iray amin'ny valiny.
Ny votoatin'ny tranokala ireo dia nalaina sy nampidirina tamin'ny mombamomba azy ireo raha vao mahita ny tranokalanao amin'ny alàlan'ireo rohy ireo ny fikarohana fikarohana. Amin'izay dia ho hita ny tranonkalanao, ary raha mahafeno ny fenitry ny milina fikarohana ianao dia hihalasa. Raha mametraka ny sain'izy ireo momba ny kalitao sy ny toeran'ny tranonkalanao izy ireo dia tsy vitan'ny hoe mihevitra ny votoatinao fotsiny izy ireo. Izy ireo koa dia manondro ny isan'ny backlink amin'ny tranokalanao. Marobe ireo backlink matetika dia midika fa tena ilaina ny atiny, ka mahatonga azy ho laharam-pahamehana ho an'ny milina fikarohana.
Ny fampiasana rohy ho lisitry ny laharana dia iray amin'ireo antony nahatonga an'i google nanomboka hanjaka toy ny milina fikarohana tamin'ny taona 1990.
Amin'ny maha-orinasa kely azy dia tsy mora mihitsy ny fananganana marika. Tsy toa ny marika lehibe hafa ianao, na dia tsy fantatrao ivelany ivelan'ny manodidina anao na ny fiarahamoninao. Fa raha te-hanombo-bola misy raharaham-barotra dia mila manorina anarana marika ianao, marika marika. Mieritrereta an'i KFC, isaky ny maheno ny anarana ianao dia manome anao ny tsipiriany rehetra ny sainao, manomboka amin'ny lohan'ny loha ka hatramin'ny tsiron'ny akoho. Izany no fiantraikan'ny marika amin'ny olona tsirairay.
Manome anao fahafahana sy fotoana tsara indrindra i Semalt hampahafantatra ny marika anao. Amin'ny maha orinasa kely azy dia fantatr'i Semalt fa mila ny fanampiana azonao rehetra ianao. Izany no antony anolorantsika serivisy mora kokoa amin'ny kalitao tsara indrindra. Hevero io ho fomba fampisehoana anao fa fantatray ny ezaka ataonao.
Ny marika anao dia zava-dehibe fa raha te-hahafantatra izany manodidina ny sakana, dia mila ny hiantsoana ny sehatra lehibe indrindra ianao. Io sehatra io dia Semalt miampy milina fikarohana toa an'i Google. Noho ny fahaizantsika sy ny tranonkalanao ao amin'ny Google, ireo "alika lehibe" ireo dia tsy misy kisendrasendra.
Amin'ny fanatsarana ny fifamoivoizana dia mahazo ny tranokalanao, tena ilaina ny fanaovana marika. Izany dia satria ny Google dia manome fitsaboana tsara indrindra amin'ny marika foana. Matetika ny marika dia mahazo laha-tsara kokoa misy rohy vitsy kokoa Tombontsoa lehibe iray hafa amin'ny fananganana marika amin'ny Google ny fitsanganana amin'ny tranokalanao rehefa afaka kelikely, na dia voaheloka noho ny fitondran-tena ratsy aza ianao.
Saingy ny marika kely dia tsy manana an'io mora io. Satria vaovao ianao dia tsy mahazo tombontsoa amin'ilay fisalasalana intsony. Ary miasa mafy kokoa mba hahazoana toerana.
Sarotra be ny fananganana marika ka afaka maharitra mandritra ny taona maro vao tsy voamarika na aseho amin'ny SERPs.
Tsy manana izany ela izany ianao?
Mbola hita eo ihany ny valiny. Farany, tsy maintsy manaiky ianao fa Semalt no fomba azo antoka sy tsara indrindra ahafahana mamoaka ny anaranao any nefa tsy matory na vola.
Ny fananganana marika dia mora toa azy sarotra. Rehefa manakarama matihanina ianao dia miala sasatra ary apetraho amin'ny olon-kafa io asa sarotra rehetra io. Ny fampiasana haino aman-jery sosialy dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hananganana marika raha manapa-kevitra ny hanao an'io irery ianao.
Miaraka amin'ny fanavaozana ny Google Quality Ratings Guide hampiharana ny politika EAT (manam-pahaizana momba ny fahatokisan-tena manam-pahaizana manokana), hitantsika izao fa mitady hamantatra tranonkala / pejy mendrika hita kokoa amin'ny Google ny valin'ny fikarohana.
Ny marika amin'ny Internet dia tena mitovy amin'ny fomba fanao SEO mahazatra. Mba hananganana marika matanjaka kokoa, mila manatsara ny fahitan'ny tranokala ianao sy ny fanatrehanao an-tserasera. Mba hahazoana ireo zavatra betsaka indrindra, mila manatsara ireo zavatra ampiharina amin'ny tranokala sy ireo zavatra ataonao ivelan'ny tranokala ianao.
Miaraka amin'ny fananganana marika, mila mandinika ny zavatra atolotrao ianao sy izay lazain'ny hafa momba ny atiny. Izany no antony maromaro mampivoatra ny SEO mitambatra tsara amin'ny branding an-tserasera rehefa mametraka azy amin'ny fomba mety ianao.